स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ राप्तीपारि – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार १२:११ English
काशीराम शर्मा, बाँके, १७ कात्तिक । बाँके सुगम जिल्लाका रुपमा चिनिन्छ तर, धेरैलाई थाहा छैन सुगम जिल्लाभित्रको पीडा । यस जिल्लाका कतिपय दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र अहिले पनि अभावसँग जुझिरहेका छन् । सबै हिसाबले सुगम मानिने बाँकेभित्रकै राप्तीपारि बघौडाको कथा र वेदना भने निकै फरक छ ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपाली रुपैयाँ नचल्ने राप्तीपारिका गाउँहरुमा अहिले नेपालीमै कारोबार हुन्छ । बघौडावासीले यसलाई सङ्घीयताको उपलब्धि मानेका छन् । सङ्घीयतापछि गाउँमा बैंक पुगेसँगै नेपाली रुपैयाँमै कारोबार हुन थालेको हो । “चुनाव भयो, गाउँलेले प्रधान चुने, विकास आउँदैछ,” नरैनापुर–३, बाबुगाउँका स्थानीयवासी रामकिसुन यादवले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा एक एमबिबिएस डाक्टर, एक एचए÷सिअहेब, एक स्टाफ नर्स, तीन अहेब, तीन अनमी, एक ल्याब असिस्टेन्ट र एक कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी भए पनि हाल एक सिअहेब, एक स्टाफ नर्स, दुई अहेब, तीन अनमी र एक कार्यालय सहयोगी कार्यरत रहेको स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त इन्चार्ज मो. तयव रायनले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज एचए मोइन खाँले लामो समयदेखि गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था भएको स्वास्थ्य केन्द्र तल्लो तहका कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि कमै बस्ने गरेको नागरिकहरुको गुनासो छ । उपचारका लागि केन्द्रमा जाँदा डाक्टर नभएर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको लक्ष्मणपुरका स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । “अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी नै हँुदैनन्, कर्मचारी भइहाले पनि औषधि नपाएर फर्किनुपर्छ, हामी उपचार गर्न जाने अरु ठाउँ छैन,” लक्ष्मणपुरका स्थानीय कमदिन खाँले भन्नुभयो ।
कोही बिरामी भइहाले पनि उपचार गर्नकै लागि केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी भेट्टाउन मुश्किल हुने गरेको खाँले बताउनुभयो । “नेपालगञ्ज लैजान यातायातको सुविधा छैन, गाउँंमै छट्पटाउनु पर्ने अवस्था छ,” खाँले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो । गाउंँमा बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरु अन्यत्र गइदिँदा नरैनापुरवासी स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित छन् ।
नरैनापुरमा सिअहेब÷हेअ छैटौं र सिअहेब÷हेअ पाँचौ तहका कर्मचारी नै आइनपुग्दा गंगापुर बाहेक सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु तल्लोस्तरका केही कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् । पालिकामा समायोजन भएर आउनुपर्ने सिअहेब÷हेअ छैटौं र पाँचौं तहका कर्मचारी आइनपुगेको कारण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको नरैनापुर गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोइन खाँले बताउनुभयो ।
ती स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु समायोजन भएर गइसकेका छन् भने बाहिरबाट आउनुपर्ने कर्मचारी आएका छैनन् । पालिका अन्तर्गतको कटकुँइया, लक्ष्मणपुर, कालाफाँटा, नरैनापुर र मटेहिया स्वास्थ्य संस्थामा दुई÷दुई जना पाँचौ तहको दरबन्दी रहेकामा त्यहाँ पाँचांै तहका कर्मचारी छैनन् । लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक जना एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी खाली छ ।
मटेहियामा एक जना पाँचौ वा छैठौ तहको अनमीको दरबन्दी खाली रहेको स्वास्थ्य संयोजक खाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको वडा नं ४ का इरसाद अलि साइले भन्नुभयो, “आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने संविधानमै भनिएको छ तर, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था कर्मचारीविहीन छन् । कसरी पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ?” जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन् भने नरैनापुरमा अपुग छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै आवश्यकता र दरबन्दीको अवस्था नहेरी कर्मचारीले माग गरेबमोजिम समायोजन गरिदिँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमै समस्या आएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहको भनाइ छ । रासस
१८ कार्तिक २०७६, सोमबार ०५:०५ मा प्रकाशित